OwoKhozi ushicilele incwadi engeka-14 | Isolezwe
Ezokungcebeleka / 14 June 2018, 5:16pm / CHARLES KHUZWAYO
Leli ciko selingumakadebona kulo mkhakha njengoba selibhale izinkondlo iminyaka engaphezu kuka-12. Izincwadi zesiZulu azishicilele zibandakanya esihloko sithi Izimbali Zemfolozi ngo-2015, okungenye yezincwadi zakhe ezithengwa kakhulu, Izintombi Zengcugce ngo-2018 efundwa e-Unisa, Inhlansi ayiloba ngokuhlanganyela nozakwabo, uNhlakanipho Zulu. UBongani akasagcini ngokubhala kodwa usebuye avumbulule futhi athuthukise izimbongi ezisakhasayo okubalwa kuzo uSiyabonga Mpungose noMaGcwabe ohlabane nyakenye ngeBest Poet kumaSatma Awards. Lezi zimbongi uzivumbulula ezinkundleni zokucobelelana ngolwazi nasemiqhudelwaneni ayisingatha KwaZulu-Natal namaphethelo. Nyakenye uBongani wethule inkampani yakhe eshicilela izincwadi iKaMavuso Publishers ezoqhubeka nokuvundulula amakhono ababhali, ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya futhi abagxile kakhulu ezincwadini zesiZulu.
UBongani uphinde waba nesandla esikhulu ekusungulweni kwengosi yezinkondlo iBack to My Roots kuKhozi FM ngo-2005, alwethula ngokubambisana noDudu ‘Lady D’ Khoza ngoLwesihlanu futhi uphinde abe nengosi eshicilela izinkondlo ngoLwesihlanu kwiSolezwe. Izincwadi zikaMavuso ziyatholakala ezitolo ezithengisa izincwadi. Ungakwazi nokuzithola kuye ngokuthumela isicelo ku-email ethi [email protected]